Intente yeeVenkile zePvc yeVenkile ePhantsi ye3x6m kunye neGreenhouse | Uloyiso
10-29 Amacandelo Amacandelo angama-30-49
$ 149,00 $ 139,00 $ 129.00
Le ntente yeqela yintente enemisebenzi emininzi. Ngaba ilungele nayiphi na iminyhadala yangaphandle, enje ngemiboniso, imitshato, amaqela. Ungayifaka nakwiyadi yakho ngasemva njengelanga elikhulu nelithandekayo ukonwabisa usapho kunye neendwendwe zakho. Kwi-additon, inokusetyenziswa njengokuhamba-kwigreenhouse. Konke kuxhomekeke kuwe.
2) Amaqhosha entwasahlobo kumalungu ukuseta ngokulula kunye nokuthoba
3) Umgangatho ophezulu obonakalayo kunye nefilimu yePVC enganyangekiyo.
Ifilimu ye-0.3mm yePVC
Izinto ezisecaleni kweendonga
Dia 42 * 1.2 / 38 * 1.0mm iityhubhu zentsimbi kwalenza
I-10x20ft (3x6m) Umzobo oqhelekileyo
Ilungele iminyhadala yangaphandle, ngakumbi efanelekileyo ekwabelaneni ngetiye yasemva kwemini nabahlobo bakho. Ifilimu ye-pvc enganyangekiyo engenamanzi kunye ne-UV kunye nolwakhiwo lwesakhelo esomeleleyo sentsimbi yenza ukuba kube lula ngakumbi kunye nokhuseleko. Kwakhona, we ungayisebenzisa njenge greenhouse ukutyala iintyatyambo, imifuno kunye neziqhamo .Ungakhulisa nantoni na oyifunayo. Le ntente yefilimu inokuqinisekisa ukuba zonke izityalo zakho zikhuselwe kwiimeko zemozulu ezibi ezifana nemvula, umoya nekhephu.
Umgangatho wezinto zokwenza intente ebonakalayo yefilimu ziphezulu. I-38 * 1.0mm kumbhobho oqinisiweyo, kunye neendlela ezi-3 zokudibanisa kunye neendlela ezi-4 zi-42 * 1.2mm zesakhelo sesinyithi esiqinisiweyo, ukuqinisekisa uzinzo oluphezulu kunye nokumelana nomoya kuyo yonke intente.
Kwifilimu yePV, ubukhulu ziingcingo ezingama-30.Ifilimu ye-pvc iyabonakala, ke xa uzimasa amaqela emini yeti okanye amatheko eminyhadala ngaphandle nabahlobo bakho, awunokonwabela ixesha lokonwaba kuphela, ungonwabela ubuhle bendalo ngaphandle kwaye Zonke iiphaneli ezisecaleni zentente yeqela ziyasuswa. Ngokulula inokuqhotyoshelwa ngemitya ye-velcro emhlophe kunye neebhola ze-bungee.
Iindonga ezisecaleni kunye nomnyango zinokuhanjiswa ngokulula. Kukho iibhola ezitsiba kwizidibanisi zokongeza uzinzo lwesakhelo, uphahla kunye neendonga ezisecaleni ziqhotyoshelwe kwisakhelo ziibhola ezimhlophe ze-bungee.
Umgangatho ophezulu, isakhelo sesinyithi esomeleleyo. Isakhelo esikhethekileyo sonxantathu, esenza isakhelo sophahla oluphezulu sizinze ngakumbi kwaye siqine.
Ityhubhu nganye yomlenze ixhotyiswe ngesiseko seenyawo esikhulu, esinokuphucula uzinzo ententeni .Kwakhona, ityhubhu nganye yomlenze inefilimu yomlenze, enokubonelela ngokukhusela ngcono ityhubhu .Sisebenzisa intambo yelastiki ukudibanisa ifilimu yetyhubhu yomlenze ngezikrufu kwityhubhu yomlenze ukwenza ifilimu ilingane ityhubhu ngokusondeleyo.
Egqithileyo Hamba ngenkukhu yenja yenja yokubaleka indlu yekheji indlu yekennel 4x3x2m
Okulandelayo: I-6x12m Clear PVC Film Party Tent ngaphaya kweGreenhouse Greenhouse
Intente yoHlahlo-lwabiwo mali
Intente yexabiso eliphantsi
Intente Party yangaphandle
Intente yeqela lomtshato
I-10x20Ft (3x6M) Umsebenzi onzima weTente yePati yeNtente
Umsebenzi onzima weentente zangaphandle kwimisitho yomtshato 5x8m
Intente yangaphandle ye-PVC Party 4x4m
Uhlahlo-lwabiwo mali lweThenda ye-5x10m ye-PE
Iintente zeMisitho yangaphandle ye-Wholesale 6x12m
Ukuthengisa okuThengisayo ngeThende yeQela eliPhantsi 13x20ft (4x6m)
6x12m Heavy Duty PVC Wedding Party Intente Nge Fi ...